बिष्णुको सासूआमा थुनिएपछी घर बाहिर आमा र दिदिको यस्तो खुलासा ! दाइजो को सट्टा नगद चाहिन्छ, हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 24, 2021 AdminLeaveaComment on बिष्णुको सासूआमा थुनिएपछी घर बाहिर आमा र दिदिको यस्तो खुलासा ! दाइजो को सट्टा नगद चाहिन्छ, हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
बिहे गरेको २७ दिन मै २३ वर्षीय बिष्णु बरालको रहस्यमय मृ’त्यु भएको छ । पोखरा महानगरपालिका २२ खाल्से दोबाटेमा माईती घर भएकी बिष्णुको बैशाख १७ गते वुटवलको मणीग्राम मन्दिरबाट बिहे भएको थियो । रूपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका वडा नंः १ बर्मा चोक आसपास घर भएका प्रदिप भट्टराईसँग बिष्णु बरालको राजिखुशी बिहे भएको थियो ।
माईती पक्षबाट बिहेको सम्पुर्ण ब्यबस्थापन बेहुली आफैले गरेकी थिईन् । बिहे भएको २७ दिनमा जेष्ठको १४ गते बिष्णु मृ’त फेला परिन् । मृ’तककी आमा अझै पनि छोरीले आ.त्मह.त्या गरेको हो भनेर पत्याउन सकेकी छैनन । मागी विवाह गरेकी उनको २७ दिन मै मृ’त्युको खबरले उनकी आमा अझै वि’छिप्त छिन ।
यसै बीच मृ’तक बिष्णु बरालकी आमाको टोली छोरीको घरमा पुगेकी छन । उनीहरु छोरीको सासु ससुरा र ज्वाईसंग केहि प्रश्न सोध्न त्यहाँ पुगेकी हुन् । उनिसंगै सैयौ गाउलेहरु पनि त्यहाँ पुगेका छन । सारा गाउलेको दवाव पछी बिष्णुको सासूआमा र फुपूलाई पनि प’क्राउ गरेको छ । उनिहरु प’क्राउ परेपछि बिष्णुको परिवारले मिडियामा दाइजो बारे यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन ।
थप कुरा भिडियोमा यहाँबाट हेर्नुहोस्ः
कमला घिमिरे र अलिफ खानको पहिलो भेटमै चल्यो कडा दोहोरी, कमलको गीत कस्ले डिलिट गर्यो युटुबबाट ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)